allsanaag.com - Daawooyinka Been Abuurka ah ee La Iib Keeno
Laascaanood waxay xukunka Isaqland ama Soomaaliyadiid ku dhacday 15-10-2007. Waxay dulmi ku jirtay:	3204	Days	21	Hours	05	Minutes	14	Seconds	Horjoogaha Soomalidu Ma Danaystaa? Ma Daryeelaa?
Daawooyinka Been Abuurka ah ee La Iib Keeno
Written by Shanle	Allsanaag: Dawooyinka loo iib keeno qaarada Afrika ayaa badankooda waxey yihiin dawooyin been abuur ah. Dawooyin dhawaan la keenay Nigeria oo lagu soo sameeyay dalka Shiinaha ayaa baaritaan la sameeyay waxaa lagu ogaaday iney yihiin dawooyinka laga soo sameeyay tabaashiir ama nuurad. Wadanka Nigeria ayaa laga isticmaalaa dawooyinka lagu soo sameeyay dalka India oo ay dawlada ogoshahay; hadaba dawadan hadeer la soo geliyay ee lagula dagaalamo kaneecada ayaa waxa ay wataan baakad lamid ah mida ay India soo saarto, laakiin kuwan waxaa laga keenay Shiinaha oo lagu soo shubay nuurad. Daawadan been abuurka ah waxaa qabtay Hay’adda Maamusha Cuntada iyo Dawooyinka ee Nigeria. Dagaalka lagula jiro waxyaabaha la soo been abuuro ayaa dawlada Nigeria waxey la dagaalamaysay oo welina ay la dagaalameysaa muddo dhan 20 sanno. Lama ogaan karo in dawada ay been abuur tahay iyo in kale illaa la geeyo shaybaar mooyee. Waxaa la sheegay in daawada kaneecada ee lagu gado Nigaria iney seddex meelood oo labo meel ay tahay dawo been abuur ah. Dawlada ayaa dadka waxey u sameesay in dawada loo yeelay meel la xoqo oo dabadeed aad ka helayso lambar kaas oo aad ka garaaceyso taleefankaaga dabadeedna wax yar kadib waxaa kuu soo baxaya Haa ama Maya. Haa macnaheedu waa dawada waa sax; Maya hadey kuu soo baxdana dawadaas waa mid qaldan. Dalka Soomaaliya ayaan ognahay in daawada laga isticmaalo boqolkiiba sagaashan iyo sagaal 99%, ay yihiin dawooyin laga soo buuxiyay Shamiito, Nuurad, Caro iyo wax kasta oo daawo loo ekaysiin karo. Mana jirto shaybaaro lagu baaro, meesha maamulada dalka ka jiraana ay ku mashquulsan yihiin arrimo siyaasadeed oo aan dadka wax dan ah ugu jirin. Dadka badankiisana waxey u dhintaan daawooyinkaa been abuurka ah oo ay cunaan.